21 พ.ค. 2563 - 18:44 น.
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေထဲက ပုဒ်မ ၂ ခုပြင်ဆင်ရေး အတွက် လွှတ်တော်က သဘောတူထားတဲ့ ပုဒ်မ၂ခုကို ပြည်လုံးကျွှတ် ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပြီးမဲခွဲဖို့ အစီစဥ်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် က မေလ ၂၀ ရက်နေ့က ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီပုဒ်မတွေကတော့ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၂(က) နှင့် (ခ)တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပုဒ်မ ၃၂ ၊ ပုဒ်မခွဲ(က)နဲ့ (ခ) မူလပြဋ္ဌာန်းချက်တွေထဲက အိုမင်းမစွမ်းသူများ ဆိုတဲ့နေရာမှာ သက်ကြီးရွယ်အိုများဆိုပြီး ပြင်ဆင်မှု၊ မသန်မစွမ်းဆိုတဲ့နေရာတွေမှာ မသန်စွမ်းဆိုပြီး ပြင်ဆင်မှုတွေ ကို ပြည်လုံးကျွှတ် ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပြီး ပြင်ဆင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွား ဖို့လွှတ်တော်က သဘောတူခဲ့တာပါ။
ဒီပုဒ်မ တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ လာမယ့်၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပူးတွဲကျင်းပဖို့စီစဥ်ခဲ့ပေမယ့် မဲပေးခန်း အပါအဝင် မဲရုံဝန်ထမ်း ၃ ဦး မဲစာရင်း မဲလက်မှက် ရုံးသုံးစာရေးကရိယာများလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမဲတွေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ရေတွက် ရေးနဲ့ အတည်ပြုထုတ်ပြန်ရေးတို့လည်းလိုအပ်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေ ကျပ်သန်းပေါင်းတစ်သောင်းလေးထောင်ကျော် ကုန်ကျဖို့ ရှိတယ်လို့လည်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးသန်းအောင်က မေလ ၂၀ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် မှာပြောပါတယ်။
ဒီဥပဒေတွေနဲ့အတူ အရင် လွှတ်တော်တုန်းကပြင်ဆင်ဖို့ သဘောတူခဲ့တဲ့ ၅၉ ပုဒ်မခွဲ ဃ နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်မှာ 'စစ်ရေးအမြင်' အစား 'ကာကွယ်ရေးအမြင်' ဟု ပြင်ဆင် ဖို့ကိုလည်း ပြည်လုံးကျွှတ် ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပြီးမဲခွဲဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် က မေလ ၂၀ ရက်နေ့က ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။
ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်တွေဟာ လွှတ်တော် အစိုး၇ နဲ့နိုင်ငံရဲ့လုပ်ငန်းတွေအပေါ် ပြောင်းလဲမှုနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာမရှိခြင်းနဲ့ နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာငွေကုန်ကျမှု အခြေအနေတို့ကြောင့် နောင်တွင်ပေါ်ပေါက်လာ မယ့်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာများနှင့်အတူ ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပလျှင် ပိုမိုသင့်တော်မယ်လို့လည်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးသန်းအောင်က မေလ ၂၁ ရက်က လွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။
အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအခန်းပါ ပုဒ်မ ၄၆၃(က)နဲ့ အကျုံးဝင်သော ပုဒ်မ တွေကို အတည်ပြုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပပြီး မဲပေးခွင့်ရှိသူအားလုံး ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်က ထောက်ခံချက်ပေး ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလ ကတည်းကစတင်ပြင်ဆင်ပြီး တစ်နှစ်ကျော်အကြာ လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး နောက် အချက်၂ ချက်ကို သဘောတူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၄ ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ တပ်မတော်သား အစုအဖွဲ့က ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တစ်သီး ပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်အားလုံးပါဝင်တဲ့ အချိုးကျစနစ်နဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ၄၅ ဦးပါဝင်တဲ့ ပူးပေါင်း ကော်မတီ ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ရက်နေ့မှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ အတည်ပြုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ ပုဒ်မပေါင်း ၄၅၇ ခု ရှိပြီး ပြင်ဆင်ရမယ့် အချက်ပေါင်း ၃၇၀၀ ကျော်ကို နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၄ ခု၊ တသီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် အစုအဖွဲ့ တို့က လူပုဂ္ဂိုလ် ၄၅ ဦး ပါဝင်တဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီက အစီရင်ခံတရပ် ပြုလုပ်ပြီး ၂၀၁၉ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
မတ်လထဲမှာ တော့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒထဲက အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၂(က) နှင့် (ခ) ပုဒ်မ ၂ ခု ပြင်ဆင် ရေးအတွက် သဘောတူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အခုလုိပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ ကို လွှတ်တော်က ရွှေ့ဆိုင်းတယ်လို့ က်တဲ့အတွက် အဲဒီပုဒ်မတွေဟာ ပြင်ဆင်လို့မရ သေးဘဲ အရင်အတိုင်းဆက်ပြီးတည်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။။
อัลบั้มภาพ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တွဲလုပ်မယ့် ဆန္ဒခံယူပွဲအစီအစဥ်ကိုလွှတ်တော်ရွှေ့ဆိုင်း